Our News Crewपोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्यो,तपाई कहिले जाने ? - Our News Crew
पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्यो,तपाई कहिले जाने ?
२०७८ कार्तिक १२, शुक्रबार १६:०७
पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढन थालेको छ । कोभिड – १९ का कारण लामो समयदेखि सुनसान रहेको पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भीडभाड हुन थालेको छ ।
अहिले पोखराको मौसम पनि निकै खुलेको छ । माछापुच्छ«े र अन्नपूर्णलगायत हिमशृङ्खलाका मनमोहक दृश्य हेर्न प्रकृतिप्रेमी पर्यटकले पोखरालाई रोजाइको गन्तव्य बनाउने गरेका छन् । सधै विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लेकसाइड र आसपासका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण कम भएसँगै लामो समयपछि आन्तरिक पर्यटकको चलहपहल देखिन थालेको हो ।
पर्यटन क्षेत्रले कोभिडका कारण निकै कठिन समय गुजारिसकेको भए पनि अब बिस्तारै लयमा आउने विश्वास यो क्षेत्रमा संग्लनहरुको छ । पोखरामा आन्तरिक पर्यटक आउँदा यसले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिएको छ ।
पोखरामा हाल निजी क्षेत्रको ५ अर्व रुपैयाँ बढीको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । करिव सात सय पर्यटकीय होटेल सञ्चालनमा छन् । कोरोनाका कारण सवै होटल भने खुलिसकेका छैनन् । कोरोनाका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा गति लिन अझै केही समय लाग्ने भएपनि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले यस क्षेत्रलाई केही राहत मिलेको छ । पर्यटकको आगमनसँगै पोखराको फेवातालमा डुङ्गा शयर ,प्याराग्लाइडिङ लगायतका साहसिक खेलमा भीडभाड बढेको छ ।